(၁၄) ရက်ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ် နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ လီဗာပူးလ် လူငယ်ကစားသမား | FOX Sports Myanmar
(၁၄) ရက်ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ် နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ လီဗာပူးလ် လူငယ်ကစားသမား
လီဗာပူးလ်အသင်း ရဲ့ လူငယ်ကစားသမား အီလီယော့ဟာ စပါးအသင်းတိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်းကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လအတွင်းက ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရပါတယ်။
စပါးအသင်းနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ကို ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းမှာပဲ လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Snapchat ကနေ ကိန်းကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့စကားံလုံးတွေအသုံးပြုပြီး ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ကနေ ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA ကချမှတ်ထားခဲ့တဲ့ စည်းမျဉ်းနံပါတ် E3 အရ (၁၄) ရက်ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သြဂုတ်လအတွင်းမှာ အီလီယော့ဘက်က ပြန်လည်တောင်းပန်မှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် အခုချမှတ်ခဲ့တဲ့ ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ကြောင့် ပြည်တွင်းပွဲစဉ်တွေအားလုံးကို အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နေ့အထိ ပါဝင်ကစားခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဖူလ်ဟမ်အသင်းနေ လီဗာပူးလ်အသင်းကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလက ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ အီလီယော့အတွက်တော့ ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်အပြင် ပညာပေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်သလို ဒဏ်ငွေပေါင် (၃၅၀) လည်းချမှတ်ခံရဖို့ရှိနေပါတယ်။
Liverpool FC's Harvey Elliott has been suspended from playing in all domestic club football foraperiod of 14 days. Full statement: https://t.co/YvPgQD2LGg. pic.twitter.com/jiPZlS8ILD
— FA Spokesperson (@FAspokesperson) October 11, 2019
လီဗာပူးလ်အသင်း ရဲႚ လူငယ်ကစားသမား အီလီယော့ဟာ စပၝးအသင်းတိုက်စစ်မြး ဟယ်ရီကိန်းက္ဘိုပီးခဲ့တဲ့နစြ် ဇန်ြလအတငြ်းက ဝေဖန်ေူပာဆိုခဲ့တဲူ့ဖစ်ရပ်နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ပြဲပယ်ူပစ်ဒဏ်ကဵခံခဲ့ရပၝတယ်။
စပၝးအသင်းနဲႛ လီဗာပူးလ်အသင်းတိုႛ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဉ်ကိုကည့်ရနြေစဉ်အတငြ်းမြာပဲ လူမကြန်ြယက်တစ်ခုဖစ်တဲ့ Snapchat ကနေ ကိန်းကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့စကားံလုံးတေအြသုံူးပ္ဘြပီး ဗီဒီယိုဖိုင်နဲႛ လူမကြန်ြယက်ပေၞကနေ ဝေဖန်ေူပာဆိုခဲ့တာေုကာင့် အဂဿလန်ဘောလုံးအဖြဲႚခဵပြ် FA ကခဵမတ်ြထားခဲ့တဲ့ စည်းမဵဉ်းနံပၝတ် E3 အရ (၁၄) ရက်ပြဲပယ်ူပစ်ဒဏ်ခဵမတ်ြခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။
သူႛရဲႚလုပ်ရပ်နဲႛ ပတ်သက်လိုႛ ဩဂုတ်လအတငြ်းမြာ အီလီယော့ဘက်ကူပန်လည်တောင်းပန်မတြေကြိုပလြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် အခုခဵမတ်ြခဲ့တဲ့ ပြဲပယ်ူပစ်ဒဏ်ေုကာင့်ူပည်တငြ်းပြဲစဉ်တေအြားလုံးကို အောက်တိုဘာလ (၁၄) ရက်နေႛအထိ ပၝဝင်ကစားခငြ့်ပိတ်ပင်ူခင်းခံခဲ့ရပၝတယ်။ဖူလ်ဟမ်အသင်းနေ လီဗာပူးလ်အသင်းကို ရောက်ရြိခဲ့္ဘပီးနောက်မြ္ဘာပီးခဲ့တဲိံ့စ်ြမေလက ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲႚ အသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားအူဖစ် မတ်ြတမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ အီလီယော့အတက်ြတော့ ပြဲပယ်ူပစ်ဒဏ်အူပင် ပညာပေးအစီအစဉ်တေနြဲႛရင်ဆိုင်ရမြာူဖစ်သလို ဒဏ်ငေပြေၝင် (၃၅၀) လည်းခဵမတ်ြခံရဖိုႛရြိနေပၝတယ်။
Home Football Premier League (၁၄) ရက်ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ် နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ လီဗာပူးလ် လူငယ်ကစားသမား